ပုံစံ (၁၀၅ ) ဆိုသည်မှာ ကျေးရွာမြေစာရင်းဦးစီဌာနအပိုင် နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြေတို.ရဲ.အကျယ်အဝန်းနဲ. အမျိုးအစားကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ပုံစံစာရွက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံစံ ( ၁၀၅) လက်ထဲ ရောက်တာနဲ. ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်လို.ရမယ်လို. မထင်လိုက်ပါနဲ.။
ဆရာရှင့်… ကျွန်မက အကျိုးဆောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ရွာမြေတစ်ကွက်ကို ဝယ်ထားမိသူ တစ်ဦးပါ ။ ပုံစံ (၁၀၅) ရပြီလို. ပြောလို. ဝယ်လိုက်မိပါတယ် ။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဝယ်ကြပါတယ် ။ အဖော်ကောင်းလို.သာ လိုက်ဝယ်တာပါ။
သိပ်နားမလည်တဲ့ အလုပ်လည်း ဖြစ်နေပြီးတော့ အခုဆို သုံးလကျော်လောက် ရှိပြီး။ ပြန်ရောင်းမယ် ဆုိုတော့မှ ပါမစ်မြေ ဖြစ်နေတယ် ဆိုလား မသိဘူး။ အမျိုးမျိုး ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်မ ဝယ်ခါနီးတုန်းကတော့ ရွှေ လို.ပြောကြပြီး ကျွန်မ လက်ထဲ ရောက်မှ အမျိုးမျိုး ပြောခံနေရပါတယ် ။
အဆောက်အအုံဆောက်မယ် ဆိုတော့လည်း ဆောက်ခွင့်က လွယ်လွယ် မရနိုင်ဘူးတဲ့ ဆရာ။ ဒီတော့ ပုံစံ (၁၀၅) ဆိုတာက ဘာလဲဆရာ ။ ရှင်းပြပါဦး ၊ ကျွန်မ ဒေါ်ခင်လှတင့်ပါ။
ရှင်းရှင်းလေးနဲ. ရှုပ်နေတာကို တစ်သက်စာ မှတ်မိအောင်ကျွန်တော် သိသလောက် ဖြေပေးပါ့မယ်။ ပုံစံ (၁၀၅) ဆိုတာက “ကျေးရွာမြေစာရင်းဌာန” က ထုတ်ပေးတဲ့ ပုံးစံ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပုံစံက လယ်ယာမြေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ရွာမြေ ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးရွာမြေစာရင်းဦးစီးဌာနအပိုင် နယ်နိမိတ် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့မြေတို.ရဲ. အကျယ်အဝန်းနဲ. အမျိုးအစားကို ဖော်ပြပေးတဲ့ပုံစံစာရွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံစံ (၁၀၅) လက်ထဲ ရောက်တာနဲ. ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်လို. ရမယ်လို. အထင်လိုက်ပါနဲ.။ အခု ပုံစံ (၁၀၅) အရ ဒေါ်ခင်လှတင့် ဝယ်ထားတဲ့မြေက “လယ်ယာမြေ” ဆိုတာသိပြီလေ။ လယ်ယာမြေ ဆိုရင်တော့ “လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလတ်မှတ်” ရှိမယ် ဆိုရင် လယ်လုပ်လို. ရမယ်ပေါ့။
အဆောက်အအုံ ဆောက်ဖို.၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခု အခြေတည်ပြီး လုပ်ကိုင်ဖို. ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ. အတွေ.အကြုံအရ ဆိုရင် “သက်ဆိုင်ရာ တုိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ” က ခွင့်ပြုမှသာ ရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင် “ဂရန်” ကိုပါ လျှောက်ထားပိုင်ခွင့် ရရှိတော့တာပေါ့။ တစ်ချိန်တုန်းက “လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၉ (ယခုအခါ - လ/ယ ၃၀ ဖြစ်သည်) နဲ. လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ တူမယ်လို. ကျွန်တာ် ဝါရင့်ပွဲစားမှန်းပြီး ဖြေလိုက်ပါရစေ။
Credit : Kyi Soe ( IC )
Ref: 21, Garden Land For Sale in Hmawbi Lakh 300
Ref: 245, အဆင့်မြင့်အသင့်နေတိုက်ခန်းများရောင်းရန်ရှိသည် Lakh 1 350
Ref: 282, အလံပြဘုရားလမ်းပေါ်ရှိကွန်ဒိုဌားရန် Call for price